m2ts codka lahayn ee cayn kasta ciyaartoyda, sida loo sameeyo
M2ts jirin dhibaato dhawaaqa iyo sida ay u xaliyaan
Waa mid ka mid ah arrinta oo fool user ee m2ts files iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user xal u heli karo arrintan iyada oo aan wax dhibaato ah sidii xal ma aha mid fudud oo kaliya, laakiin waxay gobolka of farshaxanka iyo mid sahlan oo la fulin karo iyada oo aan wax kasta oo arrinta iyo dhibaato. Xitaa haddii ciyaaryahanka ama barnaamijka in loo isticmaalay waa la jaan qaada m2ts ah kaddibna u fayl-waa iyo xaqiiqda ah in dhalashada user ayaa wajahaya ma aha oo kaliya arrinta, laakiin had iyo jeer waxa ay sidoo kale uu noqonayaa mid aad u adag in la hubiyo in meesha arrinta dhab ahaantii been iyo haddii user a ma aha casriga ah ugu xeel dheer ee dhan ka dibna waxaa aad u adag in la hubiyo in arrinta la xalin si wakhtiyaysan. Waxaa sidoo kale in la xusay in qaabka m2ts aan si weyn loo isticmaalo oo dhan iyo sabab la mid ah xal loogu heli lahaa arrimaha la xidhiidha qaab tani waa ma aha oo kaliya ay adag tahay, laakiin waxaa sidoo kale aad u badan way adag tahay in lagu fuliyo oo lagu xukumi karaa by xaqiiqda ah in waqtiyada users kuwaas oo aad u updated ah oo ku saabsan isbeddellada la xiriira iyo teknoolajiyada sidoo kale aan karin inay qaban shaqo ee sidan ah hortiisuu qummaati ugu dhaqaaqay. In qayb ka ah tutorial ah qaar ka mid ah kuwa lagu xusay xal doonaa in la hubiyo in ugu fiican waxaa la siiyaa waqti hayo maskaxda ku istareexsan ee isticmaala arrintan la xiriira ka dhigi lahaa
Audio codec qayb xallinta
Waa xanuun ah si loo soo dajiyo qayb codec maqan barnaamijka in loo isticmaalo in lagu ciyaaro ee files m2ts. Marka tan la eego Perian ah waa qayb weyn oo ka dhigaysa hubiyo in arrinta la xalin aan madax kasta. Waa codec ah taas oo sidoo kale u ogolaataa dadka isticmaala ay ku ciyaaraan ee audio iyo video codec in uu yahay nooc kasta. Codec Audio waa ciyaaryahan in uu noqon karaa mid aad u adag oo dhib badan u user iyo in ay ka gudbaan arrinta waxaa had iyo jeer lagula taliyay in ay dhex maraan heshiis user iyo heshiiska laysanka lagu saxay ama la hubiyaa halka samaynta iibsiga software sida ay hubiso in ka dhigi doonaa Dhammaan qaybaha kuwaas oo ay taageerayaan sida ku qoran oo aan adayga iyo kuwa.
Barnaamijyada Alternative xaliyo arrinta
Sidoo kale waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hubiso in arrimaha audio ma waxaa la xalin. Haddii sida shilka ah user ayaa lagala soo bixi ama lagu rakibay barnaamijka ku caan ah in ciyaaro faylasha m2ts markaa taasi waa mid aad u fudud in la hubiyo in arrinta la xalin soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka in uu si fiican u yaqaan marka ay timaado sumcadda. Marka tan la eego waxa ay sidaas daraaddeed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ay media player VLC la geliyo si ay u helaan shaqo lagu sameeyey hab ugu fiican sida ay haatan tahay mid ka mid ah ciyaartoyda oo hubiyo in dhibaatada la xalin iyo kordhin file ka mid ah noocyada oo dhan waa la ciyaaray si fudud iyo si habsami leh.
1. M2ts codka lahayn in Windows Media Player
WMP waa ciyaaryahanka ugu fiican abid lagu sameeyo madal daaqadaha. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in arrinta m2ts ku dhawaaqa aan la xalin by in la hubiyo in barnaamij loo yaqaan tsMuxer waxaa loo isticmaalaa si aad u ogaato audio ee faylka oo uu soo badbaadiyey on ray Blu ka disk. Marka la sameeyo audio in laga helay ay tahay in la raran yihiin sida file ah ilaha si loo xaliyo arrinta. Haddii kordhinta waa .dts markaas user ay u baahan tahay in aad ku darto codec AC3 si aad u hesho arrinta la xalin buuxda.
2. M2ts codka lahayn in ciyaaryahanka KM
Kuwa safraa in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira waa kuwo sahlan oo user ay u baahan tahay in la hubiyo in soo socda waxaa loo sameeyaa si loo xaliyo arrinta:
Tix> Gudaha Decoder Audio> Disable AC3
Tix> External Decoder Audio> awood ama ay doortaan AC3 ama nidaamka default
Haddii habka kor ku xusan ma ka dibna shaqeeyaan user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in jidka soo socda waa
raaceen sidii tallaabo dheeraad ah in dhibaatada la xalin ee buuxa:
Tix> Splitter> MPEG -2-TS splitter
3. M2ts codka lahayn ee Premier Pro
Pro Premier waa barnaamij loo sameeyay by nidaamka Adobe ka Inc. iyo waxa ay taasi la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah oo aan wax arrintan oo dhibaato si dadka isticmaala ay natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira ka heli kartaa. Xalka in loo arkaa in ay m2ts faylasha aan ciyaaro audio iyada oo barnaamijkan waa mid aad u fudud oo sahlan in la raaco iyo user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in arrinta la xalin si fudud in la hubiyo in browser warbaahinta loo isticmaalaa in lagu soo dhoofsadaan files iyo in ay tahay.
4. M2ts codka lahayn ee Vegas
Vegas iyo hababka kale ee la soo saaray oo ay ku dhiirigelinayaan isla hubiyo in dhibaatooyinka yihiin hagaajin iyo dhibaatooyinka waxaa lagu xalin iyo arrimaha audio ayaa sidoo kale lagu xalin sida ugu dhaqsaha badan. Si loo hubiyo in aan dhibaatada la xalin waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ay baakad codec in lagu rakibo waxaa ka mid ah dadka naafada ah ama uninstalled ugu dhaqsiyaha badan. Baakad ayaa sida K-Lite waa mid ka mid ah sababta ugu badan ee arrinta arrintan la xiriira sida Vegas ayaa dhisay baakado codec oo waa in aad loo dhawro in baakad dheeraad ah marnaba lagu rakibay arrintan la xiriira.
5. M2ts codka lahayn QuickTime
QuickTime sidoo kale waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican in la hubiyo in dhibaatada marna soo food saaray dadka isticmaala ee arrintan la xiriira oo dhan files waxaa lagu ciyaaray fudayd iyo qanacsanaanta sameeyo. Si aad u hubiso in m2ts ka dhalna ma lahayn audio loo xalin lahaa sida ugu waa in user waa in ay hubiyaan in qaab ah waxaa loo baddalaa QuickTime iyo arrinta markaas fadhiya oo aan wax dhibaato ah u samayn. Si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ay convertors in ay yihiin tobanaan kun tirada waxaa loo isticmaalaa si aad u hesho arrinta go'an.
Sida loo Play iyo Beddelaan Panasonic AVCHD Files
Bal maxaa Video Converter aan shaqaynayn?
Sida loo Beddelaan wmv in AVI in Windows iyo Mac
> Resource > Beddelaan > m2ts codka lahayn ee cayn kasta ciyaartoyda, sida loo sameeyo